Kuwana yemahara pamhepo mitambo yekudzidzisa yevana kuti vatambe dzimwe nguva zvinogona kuve kwakaoma.
Semubereki kana muchengeti, iwe unoda kuti vana vako vatambe mitambo inonakidza uye / kana yezvidzidzo kuti vasaonekwa nevaraidzo isina kunaka. Unoda zvakare kuti mwana wako adzidze chimwe chinhu chitsva kana kusevha pane izvo zvavanenge vatoziva.
Kana iwe akatengera mwana wako smartphone kana Laptop, edza iyi yemahara online mitambo yekudzidzisa yevana kuti vachengetedzwe uye vafarire.
Sheppard Software webhusaiti yekudzidzisa nemazana emahara emitambo yekudzidzisa. Iyo mitambo nezvirimo pane saiti zvakagadzirwa kuti zviwedzere mutsindo uye zvinoonekwa kuitira kuti kudzidza kunakidze, kuitwe, uye kurangarirwa kwevana.
Iyo mitambo ine akawanda akaomarara mazinga ayo anopokana nevana vezera chero zvisinei kuti vanosvika danho ripi, uye kurovedzera pfungwa yavo muzvidzidzo zvakawanda. Izvi zvidzidzo zvinosanganisira Math, Geography, Science, Mitauro, mitauro, Hutano, uye zviitiko zveKugadzira pakati pevamwe.
Sheppard Software mitambo ine ruvara, yakapusa, uye isina kugezwa senge mimwe mitambo yekudzidzisa yepamhepo. Mirayiridzo yemutambo wega wega iri nyore kunzwisisa uye inovhara kudzidza kwekutanga izvo zvingaitwe neimwe mitambo.
National Geographic Vana
National Geographic Vana ndeimwe webhusaiti yekudzidzisa iyo inoratidza mavhidhiyo uye emahara online ekudzidzisa mitambo yevana pakati pemamwe mabasa. Iyi mitambo inotariswa zvakanyanya pane zvakasikwa nemhuka, asi vana vanokwanisa zvakare kushanyira nyika dzakasiyana, kudzidza zvimwe zvinonakidza chokwadi, uye kupira nekupindura quizzes, kutumira mhinduro, kana kutumira mafoto.
Iyo yemahara mutambo hub yakazara nemhando uye inotarisana mitambo seyi Iyo yepasi pevhu njanji: Rwendo rwekuenda kurusununguko, kana Zeus Anesimba pakati pevamwe vazhinji.
Vana vanowana mirairo yakajeka uye mazhinji matanho ekuoma, ayo anosimbisa pfungwa, ndangariro, uye humwe hunyanzvi humwe. Vabereki vanogona kushandisa National Geographic Vana mitambo kudzidzisa vana nezve sainzi, mhuka, dzimwe nyika, uye zvine hukama nenyaya kuti vachengeteke.
Funbrain inzvimbo yemahara yemitambo yekudzidzisa yevana vari mumashure Pre-K kusvika Giredhi 8 kunakidzwa nemitambo, mabhuku, makomiki, uye mavhidhiyo munzvimbo inonakidza uye yakachengeteka online. Vana vanogona kuvandudza hunyanzvi mukuverenga, kuverenga nekuverenga, math, uye kugadzirisa matambudziko nekutamba mitambo yekudzidza online yemahara ingave iri kumba kana kuchikoro.
Uyezve, apo vana vanoda zororo kubva kumitambo, vanogona kuverenga dzakasiyana siyana mabhuku edhijitari pane saiti yeFunbrain. Mamwe mazita ayo vana vachawana ipapo anosanganisira Amelia Anonyorazve, Chinyorwa cheWimpy Kid, uye Brewster Rockit pakati pevamwe vazhinji.
Mr. Nussbaum iyi webhusaiti yekudzidzisa iyo inopa akasiyana siyana emitambo yekudzidza yakakamurwa nemazinga ezinga uye rudzi rwemukati. Pfungwa iri kuseri kwesiti ndeyekuvandudza kudzidzisa kweshoko dzakakosha, mazano, misoro uye chokwadi chinoisa kuburikidza nekudyidzana pamusoro pewebhu.
Iyo saiti zvakare inopa vadzidzisi yakavimbika internet platform ivo yavanogona kushandisa mukirasi kana computer lab kuti varevhe akasiyana siyana yavanenge vachidzidzisa mukirasi. Mitambo inofambidzana yakagadzirirwa kuita kuti kudzidza uye kuunganidza ruzivo kunakidze kune vana vari mumakiromita K-8 kukwidziridza kuvaka-kugona uye kugona.
Mitambo yaVaNussbaum inopa vana mabasa asina kujairika senge superhero rinoponesa nyika kubva kune yevatorwa madimikitivha, ruoko-wrestling pretzels, nezvimwe. Ichi chiitiko-chinosimbisa kuti vana vanonyudzwa mumitambo yekudzidzisa uku vachidzidzira maitiro ekutanga mune zvese zvidzidzo.
Poptropica yakagadzirwa nemunyori wevakakurumbira vana comic, Chinyorwa cheWimpy Kid. Iyo saiti inopa yemahara yekutamba ruzivo rwevana kuti vaongorore uye vatambe mitambo yekuita, nyaya, uye nhare dzakasimba mukuchengeteka.
Mutambo wemuhedhiyo unobvumira vana kuti vagadzire mavara kuti vafambe zvitsuwa zvemitambo, uye vashandise kuverenga kwemitambo kunakidzwa nazvino nezvakaitika kare nhoroondo. Vana vanogona kusimudzira hunyanzvi hwavo hwekugadzirisa matambudziko pavanowana zvakavanzika uye vazvigadzirisa zvichienderana nezvitsuwa zvavanowana.
Poptropica ndeye KidSafe yakasimbiswa saka iwe unokwanisa kuvimba kuti vana vako vari munzvimbo yakachengetedzeka yepamhepo inosangana nemitemo yakaoma yezvese yepasirese yevana.
ABCYa! inzvimbo yemitambo yakagadzirwa nevadzidzisi vezvikoro zviviri zvevanhu. Pfungwa iyi yakavezwa kubva pakuda kuendesa zviwanikwa zvemhando yepamusoro izvo zvinogona kubatsira vadzidzi kuti vabudirire. Nekudaro, ivo vaviri vadzidzisi vakagadzira iyo yakabvumidzwa yedzidzo makomputa mitambo saiti yevadzidzi vekutanga kuti vadzidze mitauro yemitauro uye math online.
Iyo saiti inopa inodarika mazana mana emitambo yekudzidzisa uye inonakidza mamakisi Pre-K kusvika Giredhi 400. Iyi yemahara yemitambo yekudzidza yemahara evana yakaiswa mumusoro nenyaya uye giredhi. Misoro yakafukidzwa inosanganisira typing, kuwanda, kucherechedzwa kwemuitiro, zvikamu zvekutaura nezvimwe.
Kunze kwemitambo yevana pane ese maitiro ekufunda uye mazinga, iwe zvakare uchawana mitambo inongonakidza yekutamba pasina kunyatsodzidzisa vana.
PBS KIDS inzvimbo yekushandisa sosi yekudzidzisa iyo basa rayo kuita chirongwa chakasimba pahupenyu hwevana kuburikidza nevaraidzo yakavakirwa pazvidzidzo. Iyo saiti inoshandisa nzira ye360-degree yekupa vana simba kuti vabudirire muchikoro uye muhupenyu.
Kune dzakasiyana siyana dzekunakidzwa, dzidzo, uye yekugadzira inowanikwa pane yePBS KIDS webhusaiti iyo inobatsira kuvaka ruzivo, kuda kuziva, kufunga kwakasimba, uye kufungidzira. Iyi mitambo inobatsira vana vepamberi uye vechikoro vana vakura mukukura kwavo, hwemagariro, hunhu, uye hunhu hwekuvandudza mwana
Yekutanga Mitambo ikambani yemitambo yepamhepo yakatangwa naSusan Beasley, mudzidzisi akavaka mitambo yepamhepo yekuvaraidza vadzidzi vake mukirasi ivo vachidzidza. Iyo kambani ine mamwe mawebhusaiti mazhinji ane zviuru zvemazana emitambo mazita uye kuverenga.
Iwe unogona kuwana yemahara isina kuvharika mitambo uye vana vanogona kutamba paApple, piritsi, kana Laptop. Mitambo yacho haingovafadze chete asi ichaita kuti vadzidze munzvimbo inonakidza pavanotamba math, kuverenga, uye mimwe mitambo inotonhorera nemapipi.
Mitambo yese yakasununguka kutamba uye kuongororwa kuti ive yakachengeteka kune ese mazera. Kunyangwe mwana wako achida racing, adventure, chiito, pfeka, kana mapuzzle, pane chimwe chinhu kwavari paPrayimari Mitambo site.
Bata Pfungwa dzeVana Nemitambo Yekudzidzisa
Pane zvakawanda zvekudzidza online mazuva ano. Kune vana, iwe ungangodaro uchakanganisika nesarudzo nekuda kweiyo huwandu hwenzvimbo dzekunakidzwa uye dzekudyidzana dzekudzidza nemahara emitambo yekudzidzisa yemahara yevana. Vana vako havazongovaraidzwa chete uye kuziviswa, asi ivo vanozove vakashongedzerwa nehunyanzvi hwakakosha kuvabatsira kuti vabudirire mune yavo yedzidzo ramangwana.
Iwe unayo chero epamhepo yemahara yemitambo yekudzidzisa pamhepo? Goverana mune zvakataurwa pasi apa. Kana iwe uchida kunyange nzira dzakawanda dzekuti vana vako vadzidze kumba, tarisa gwara redu pane zvakanakira mapurogiramu uye zvishandiso zvekudzidzisa vana vako. Isu tinawo vatungamiriri pane zvakanakisa typing mapulogalamu, math math, mimhanzi mimwe, uye kunyorera zvirongwa zvevana pakati pevamwe iwe vaunogona kushandisa kubatsira iwe vana kudzidza nekunakidzwa ivo vachiri iko.